Nhau - Kugadziriswa uye kugadzirisa kwepombi muforoma
Kugadziriswa uye kugadzirisa kwepombi muforoma
Zvichienzaniswa nezvimwe anoumba, mutopota kukodzera mouldhas zvikuru chaiwo uye kunzwisisa mamiriro, uye isu tine yepamusoro zvinodiwa kuti kwayo kugadzira uye kugadzira. Naizvozvo, mune yekugadzira maitiro epombi mafuru, chengetedzo chaiyo uye kugadzirisa zvinobatsira mukuvandudza kugadzirwa kwehunyanzvi uye nekuchengetedza kugadzikana kwekugadzirwa kwezvigadzirwa.
Nhasi, ndichagovana newe chimwe chiitiko chevashandi vedu mukuchengetedza mafuru.
1. Mushure meforoma yaiswa pane jekiseni kuumbwa muchina, mhanyisa isina chinhu chakuvhuvhu kutanga. Cherekedza kana kufamba kwechikamu chimwe nechimwe kuchichinjika, kunyangwe paine chero chiitiko chisina kujairika, ingave ejection sitiroko uye yekuvhura sitiroko iri munzvimbo, kunyangwe nzvimbo yekuparadzanisa yakanyatsoenderana panguva yekuumbika kweforoma, uye kana iyo yekumanikidza ndiro ndiro yakasungwa.
2. Kana chakuvhe chiri kushandiswa, chengetedza tembiricha yakajairika uye shanda pane chaiyo tembiricha kuti uwedzere hupenyu hwehupenyu hweforoma.
3.Mechanical standard zvikamu zveforoma zvinofanirwa kuongororwa nguva dzose, uye mafuta ekuzora anofanirwa kuiswa pazvinenge zvakakodzera, senge thimble, mutsara chinzvimbo, gwara rinotungamira, sleeve yegwara. Kunyanya kana tembiricha yakakwira muzhizha, mafuta anofanirwa kuwedzerwa kanokwana kaviri kuitira kuti zvikamu izvi zvishande zvakapfava.
4. Mushure mekunge chakuvhuvhu chashandiswa, mhango uye musimboti zvinofanirwa kucheneswa, uye hapana marara anogona kusiiwa, kuitira kuti isakanganisa pamusoro peforoma uye pfapisa anti-ngura mumiriri.
5. Hapafanire kuve nemvura yakasara inotonhorera muforoma kutonhora sisitimu, uye inofanirwa kucheneswa kudzivirira muforoma kubva pakuita ngura uye kuvhara nzira yemvura, kuti iwedzere hupenyu hwenzira inotonhorera yemvura.
6. Geza pamusoro pevhu nguva dzose. Paunenge uchikwesha, shandisa doro kana gadziriro yeketone uye wozoomesa yakaoma munguva yekudzivirira yakaderera mamorekuru macomputer anogadzirwa panguva yejekiseni yekuumba maitiro kubva mukukanganisa iyo mhango mhango.
7. Kana chakuvhuvhu chava kumhanya, nyatso tarisa mamiriro ekushanda kwechikamu chega chega chekudzivirira kudzivirira kusanzwisisika uye kupisa kweiyo yekubatsira system.
8. Mushure meforoma yamhanya, isa ngura inhibitor kune iyo mhango mhango kudzivirira ngura. Dhinda rekunze kweiyo chigadziko chigadzirise ngura.
9. Foroma rinofanira kuvharwa zvine simba panguva yekuchengetera kuti guruva risapinde mudumbu uye zvichikonzera kuti fosi iite ngura.
Pekupedzisira, matanho ekuchengetedza muforoma:
1.Mold zvikamu zvinofanirwa kuzorwa mafuta panguva yekuchengetedza kwemazuva ese
2. Iko pamusoro peforoma kunofanirwa kuchengetwa kwakachena, usanamatire mavara pamusoro peforoma
3. Kana zvisizvo zvikawanikwa muforoma panguva yekugadzirwa, seyakajairwa kusanzwisisika kana kuvhurwa kukuru uye ruzha rwekuvhara, chimbomisa muchina kuti uongororwe nekugadziriswa munguva. Usaite mamwe mashandiro.